Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Wararka Dowladda » Poland waxay noqotay xubintii ugu dambeysay ee Barnaamijka Ka-dhaafitaanka Fiisaha Mareykanka
Poland waxay noqotay xubintii ugu dambeysay ee Barnaamijka Ka-dhaafitaanka Fiisaha Mareykanka
Madaxweynaha Xiriirka Socdaalka Mareykanka iyo Agaasimaha Guud Roger Dow ayaa soo saaray bayaanka soo socda ee ku saabsan in Poland si rasmi ah loogu magacaabay xubin ka mid ah Barnaamijka Ka dhaafida Visa (VWP):
“Waxay u tahay dabaaldeg labada dal ee Mareykanka iyo Poland in labada dal ay hadda si rasmi ah u wada-hawlgalaan VWP, oo ah barnaamij halbeeg u ah dahabka si isku mar kor loogu qaado amniga Mareykanka iyo dhaqaalaha Mareykanka.
Mar kasta oo waddan soo galo VWP, Mareykanku had iyo jeer wuxuu arkay koror ballaadhan oo booqashada waddankaas ah - oo maanka ku haay in dadka socotada ah markaa si wanaagsan loogu baaro borotokoolka adag ee amniga.
Ogolaanshaha Poland waxaa la saadaalinayaa inay soo saarto $ 702 milyan oo dheeri ah oo ku baxa kharashka safarka iyo 4,300 shaqooyin Mareykan ah saddexda sano ee ugu horreysa. Awoodda VWP ee kordhinta barwaaqada Mareykanka iyo amniga Ameerika labadaba - iyada oo aan lagu xusin xoojinta xiriirka aan la leenahay xulafadayada siyaasadeed ee ugu muhiimsan - waxay ka dhigeysaa tusaale ifaya oo ah dejinta siyaasad hal-abuur leh, oo guuleysata.
"Waxaan uga mahadcelineynaa maamulka Trump aqoonsigii ay u aqoonsadeen VWP inay gacan weyn ka geysato amnigeenna iyo dhaqaalaheena, waxaana ku rajo weynahay in musharrixiinta kale ee xoogga leh ee soo galaya - sida Israel iyo Brazil - ay sidoo kale u sii gudbi doonaan xubinnimada."
WTM: Wax ka qabashada isbeddelka cimilada Maalinta 3 ee London
In kasta oo Dorian, u safarka Kariibiyaanka sii kordhaya
Meelaha ugu wanaagsan (iyo kan ugu xun) safarka bisha malabka ee...
Macluumaad Cusub oo Cilmi-baaris ah oo ku saabsan Nolosha Dhimashada Kadib
Luxury Yachting oo saaran harada Michigan
Horumarka Xulashada Dawooyinka ee Maqaarka caabuqa